Ka Bogo kooxaha gaaray guulaha xiriirka ah ee ugu badan horyaalka Premier League… (Man City, Liverpool, Arsenal & Chelsea oo qeyb ka ah!) %
By Ramzi Yare	 On Oct 21, 2019
. Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1 ah kulankoodii 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa kooxaha guulaha xiriirka ah ee ugu badan gaaray horyaalka Premier League iyadoo ay ka soo muuqdeen Manchester City, Liverpool, Arsenal iyo Chelsea.
Kooxda Liverpool ayaa xalay la soo gabagabeeyey guulaheedii xiriirka ahaa kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen Manchester United kaddib markii ay horay guul u soo gaareen 17 kulan oo xiriir ah.
Taasi waxa ay ahayd rikoorkii labaad ee ugu dheeraa dhanka guulaha horyaalka Premier League taariikhda waxaana ay ka dambeyeen hal guul oo kaliya kooxda Manchester City oo haysata 18 guul oo xiriir ah.
Sky Blue ayaa ah kooxda haysata guulaha ugu badan ee xiriirka ah horyaalka Premier League haatan waxaana ay guul gaartay 18 kulan oo isku xiga horyaalka intii u dhaxaysay bilaha August iyo December sanadkii 2017-kii.
Yeelkeede, Liverpool inkastoo xalay laga laga horjoogsaday inay sii wadato rikoorkii guulaha xiriirka ah oo ay ku gaari lahayd kooxda Man City, haddana waa guuldarro la’aan oo weli lama garaacin 26-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League.
Reds ayaa guulahan 17-ka ah ee xiriirka ah horyaalka Premier League waxa ay sameysay intii u dhaxaysay bilaha March iyo October ee sanadkan 2019.
Kooxda Manchester City ayaa sidoo kale 15 guulo oo xiriir ah horyaalka Ingiriiska sameysay intii u dhaxaysay bilihii February iyo August sanadkan 2019, laakiin Liverpool ayaa horay u soo jabisay rikoorkaan.
Dhinaca kale Arsenal ayaa rikoorkan horay uga soo muuqatay kaddib markii ay 14 guul oo isku xiga ay sameysay horyaalka Premier League intii u dhaxaysay bilihii February iyo August ee sanadkii 2002-dii.
Kooxda reer London ee Chelsea ayaa sidoo kale rikoorkan horay u sameysay kaddib markii ay 13 kulan oo xiriir ah ay guulo gaartay horyaalka Premier League intii u dhaxaysay bilihii October iyo December sanadkii 2016-ki
Muqdisho City Club Vs Dekedda Fc:-Wax Waliba Aad Ugu Baahan Tahay Kulanka Adag